बित्तिकै संसारको यो क्षेत्रमा प्रयोगकर्ता र विशेषज्ञहरु लागि दुवै प्रयोग गरिन्छ जो एक समय, पछि जनसंख्याको बहुमत बीच लोकप्रिय छ कि केही नयाँ कुरा, विशेष गरी कठबोली (शब्दजाल) देखिन्छ discovers रूपमा। यो नै भाग्य र जहाँ यस्तो अभिव्यक्ति को एकाग्रता बस सबै व्यावहारिक अनुपात भन्दा बढी कम्प्युटर खेल, को क्षेत्र उम्कन थिएन। साँच्चै, सरल वा संक्षिप्त शब्द प्रयोग यहाँ संसारमा सबै भन्दा ठूलो मूल्य पुग्छ, र कहिले काँही आफ्नो समझ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईं एक प्राविधिक सहयोग विशेषज्ञ, पदोन्नति वा एउटा विकासकर्ता हुनुहुन्छ भने किनभने, तपाईं सार्वजनिक वा सहकर्मी भन्नुभयो थियो के को सार व्यक्त गर्न केही अभिव्यक्ति सक्षम छ कि यो सुक्खा र संक्षिप्त भाषा स्वामित्व गर्न आवश्यक छ। र छोटकरीमा वाक्यांश "250 सीडी" तिनीहरूले जान्नु आवश्यक सबै व्यक्त हुनेछ त्यागेर।
जबकि यस्तो घटना मानव गतिविधि कुनै पनि व्यावसायिक क्षेत्र अवलोकन गर्दै छन्, तर खेल कठबोली को एक किसिम फेला छ। Uninitiated मान्छे मात्र यो "सीडी", "बीचमा भीड", र आफ्नो पवित्र अर्थ बुझ्न प्रयास गर्ने सोच अनौठो अभिव्यक्ति सुनेर MARVEL गर्न सक्छन् र आश्चर्य,। आखिर, कम्प्युटर र खेल को सांत्वना विशाल विविधता र तिनीहरू सबै आफ्नै मोडेल, जीवन यसको आफ्नै सर्तहरू बनाउँछ जो छ। तसर्थ, उहाँले "ट्यांक को दुनिया" को एक प्रशंसक भन्न चाहन्थे के को शक्ति "टुन्ड्रा" र अन्य आर्केड बुझ्न छैन हरेक प्रयोगकर्ता। को पाठ्यक्रम त्यहाँ ओभरल्याप कि चिरपरिचित अभिव्यक्ति हो, तर किनभने अनुभव खेल चरणको वा साईट uninitiated भवन भाषण निर्माण को जटिलता को तिनीहरूलाई बुझ्न मौका रहने छैन। विशेष गरी खेल कठबोली छैन उमेर, यो निरन्तर यसको आधार नयाँ शब्द प्रकारका विस्तार र अवशोषित छ गर्दैन। यी सबै अभिव्यक्ति यो अस्तव्यस्त एक्स्ट्रानिअस प्रश्नहरू धेरै बनाउँछ जो, जानकारी प्रवाह उत्तेजित गर्दछ किन जो छ, नियमित प्रयोग गरिन्छ: "के छ" सीडी, "के गर्दछ संक्षिप्त" सीसी "र" केसी "" "?"? र यति मा। अरूको लागि जबकि भाषा, सरल परिचित छ, र यो कुनै पनि संगीत भन्दा राम्रो सुनिन्छ।
खेलाडीहरूको को शब्दजाल को गठन जो संचार को प्रवेग योगदान गर्ने अलिखित नियम, मार्फत बित्दै कि जोड महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले, यो सबै अभिव्यक्ति बन्चरो संग बन्द कटा भने, छोटो र संक्षिप्त छन्। तिनीहरूलाई बुझ्न, तपाईं प्रस्तुति को सार महसुस गर्न र नियमित आफ्नो शब्दावली अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ। यसरी मात्र तपाईं कठबोली खेलाडीहरूलाई एक व्यापक ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छन्। गैर-विशेषज्ञहरु र निष्क्रिय खेलाडीहरू लागि आफ्नो माग गम्भीर शङ्का रहिरहन्छ तापनि।
हामीलाई हेरौं व्यवहार मा, केही लोकप्रिय वाक्यांश खेलाडीहरूलाई को समुदायमा सुने गर्न सकिन्छ भन्ने। प्राय सुनिन्छ जो प्रश्न, - सीडी "के छ" "?" यो वाक्यांश "Dota" लगभग हरेक खेल जहाँ spells प्रयोग गरिन्छ देखि सार्नु छ किनभने जवाफ, धेरै banal छ, एक RECHARGE कुनै पनि कौशल वा क्षमता छ। यो एक perk reusing वा फेरि कार्य लागू अघि पर्खाइ को रकम संकेत गर्छ। को शब्दजाल को प्रवेश र "ट्यांक दुनिया" जोगिन गर्न असमर्थ। त्यसैले wot के "सीडी" बारे केहि अनुभवहीन प्रश्न उत्तर, अब अन्धो गल्ली कसैलाई राख्नु छैन। ट्यांक परियोजना आधिकारिक वेबसाइट, बिल्कुल सबै खेल मा पाइएका बन्दुक को सूचीबद्ध जहाँ cooldown अवधि को विश्व भ्रमण गरेर तपाईंलाई सजिलै जाँच गर्न सक्छन्।
Wot को प्रयोग
तर यो सबैभन्दा ठूलो मान छ जो एक असाधारण सेटिङ, छ भन्ने विश्वास गर्छन् छैन। आफ्नो प्रभाव महत्त्वपूर्ण कुरा, तर असीमित छैन। यो एक महत्वपूर्ण भूमिका र लडाई वाहन, शुद्धता र हतियार को आन्दोलन को गति खेल्छ। यी सबै अवस्था तिनीहरूले परस्पर छन् जो यसको आफ्नै प्रणाली गठन। कमीकमजोरी को फलस्वरूप प्रत्येक एकाइ को वजन सन्तुलनमा आवश्यकता खेल्छ कि लाभ क्षतिपूर्ति छन्।
अमेरिकी र फ्रान्सेली मशीनरी
गोले ड्रम संग ट्यांक को बन्दुक लागि चार्ज समय प्रस्ट्याउने एकै समयमा सिस्टम धेरै फरक ठाउँ लिन्छ खुवाउन। र के सीडी ट्यांक को विश्व मा बुझ्न, यो प्रविधिको यो वर्ग को लागि यति सजिलो, यो पहिलो नजर मा देखिन्छ रूपमा छ। आखिर, यी लडाई वाहन विशिष्ट सुविधा छ, यो आफ्नो डिजाइन मा शामिल भएको थियो, र ऐतिहासिक खेल प्रतिबिम्बित गरिएको छ। तिनीहरूले लगातार शत्रु मा आगो गर्न सक्नुहुन्छ, तर पूर्ण टेप को शूटिंग सम्म मात्र। फ्रान्सेली र अमेरिकी ट्यांक चार छ गर्न राउंड्स देखि शत्रु विज्ञप्ति, र त्यसपछि हटाइएको आरोप अवधिको मा (एक मिनेट यसलाई 30 सेकेन्ड देखि लिन्छ समय प्ले मामलामा): युद्ध को सन्दर्भ मा निम्नानुसार छ। शत्रु महत्वपूर्ण क्षति inflicted, तर पनि लडाई वाहन बारूद Replenish गर्न उत्प्रेरित गर्छ आक्रमण गर्न। यो प्रविधी अनुगमन ट्यांक को मामला मा रूपमा, स्थिति को बन्द गर्न defenseless र आक्रमणकारीहरूले घृणा उत्पन्न गर्न असमर्थ हुनेछ प्रयोगकर्ता आवश्यक छ।
यो shortcoming को प्रयोगमा टोली प्ले केही पक्षहरू बनाए। त्यहाँ सीडी शत्रु देखाउँछ कि addon छ। उहाँले एक निषेध ग्राहक कार्यक्रम परिमार्जन छैन तापनि युद्ध सम्बन्धी गेम्स किनभने सर्भर र प्रयोगकर्ता बीच जडान गर्ने सम्भावित उल्लंघन यसको प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दैन। ग्राहक तपाईँको आफ्नै खाता नियन्त्रण गुमाउँदा पुन देखि - यस्तो हस्तक्षेप को नतिजा फरक हुन सक्छ। सबै कार्यहरू आफ्नै जोखिममा मा प्ले प्रयोगकर्ता द्वारा बाहिर छन् भनेर कार्यक्रम-मोड कोड पछि, खराब भाइरस समावेश गर्न सक्छ। फलस्वरूप, थाहा इच्छा के सीडी र के यसको अवधि, तपाईं व्यक्तिगत डाटा वा अझ गम्भीर परिणाम को हानि गर्न नेतृत्व गर्नेछन् जो मूल्य पनि उच्च, भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ।
डंगओन Mogushan: RAID विवरण
"सबै उमेरका: Sims 3"। "यस Sims 3": कोड को एक समीक्षा, स्थापना
जहाँ Warframe तन्त्रिका सेन्सर मा फेला पार्न?
Survarium: सिस्टम आवश्यकताहरु। अवलोकन Survarium, जारी मिति, खेल मा मिशन र कार्यहरू
Solovev व्लादिमीर, को दार्शनिक: जीवनी, लेखोटहरू
आफ्नो विश्वासी मित्र र सहायक - व्यक्तिगत डायरी। पृष्ठ लेआउट र आवरण
"शेवरलेट Takuma": प्राविधिक विनिर्देशों
Tabulation समारोह: एक कार्यक्रम कसरी लेख्न?
TGP विधिहरू। राज्य र कानून को सिद्धान्त को विषय र विधिहरू
Rebecca Donovan - जीवनी र काम